အားလပ်ရက်မှာ သူငယ်ချင်းတွေအုပ်စုလိုက် အအေးလေးသောက်၊ မုန့်လေးစားရင်း ဂိမ်းလေးတွေမဆော့ချင်ကြဘူးလား ? 973 views
အားလပ်ရက်မှာ သူငယ်ချင်းတွေအုပ်စုလိုက် အအေးလေးသောက်၊ မုန့်လေးစားရင်း ဂိမ်းလေးတွေမဆော့ချင်ကြဘူးလား ?
ပိတ်ရက်မှာ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး အပြင်သွားဖို့ကိုလည်း အပူဒဏ်ကြောင့်အပြင်ထွက်ဖို့ တော်တော်လေး စဉ်းစားယူနေရတယ်။ နောက်တော့အတွေးတစ်ခုပေါ်တာနဲ့ပဲ သူငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်၊ လှည်းတန်းမှာလူစု လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ August ကို ဦးတည်လိုက်ကြတယ်။ August ကိုတော့လှည်းတန်းဘက်အခြေချနေတဲ့ သူတွေတော့မသိသူမရှိပါပဲ။ အက်မင်ကိုယ်တိုင်လဲဒီဆိုင်ကိုခဏခဏရောက်ဖြစ်သလို ရောက်ဖူးသူတိုင်းလဲ ဒီနေရာလေးကိုမှတ်ထားကြမှာပါ။ ဒါမဲ့လူအများစုမသိသေးတာက ဒီဆိုင်မှာ ဂိမ်းကစားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပဲ (အက်မင်ကိုယ်တိုင်လဲသိတာမကြာသေးပါဖူး)
August ကိုလူတိုင်းသိနေတဲ့ပုံစံလေးက Milk Tea တွေကောင်းတယ်။ Juice တွေမိုက်တယ်။ Snack တွေစားကောင်းတယ်။ ကိုရီးယားသီချင်းလေးတွေဖွင့်ပြီး ကိုရီးယားခရေဇီ Gals လေးတွေထိုင်ကြတယ်။ ထိုင်ရတာအေးအေးဆေးဆေးရှိတယ်။ အုပ်စုလိုက်ပြောကြဆိုကြနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေး ဆုံနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့။ လှည်းတန်းမှာတွေ့ကြမယ်ဆို August မှာပဲချိန်းကြတာ။ ကိုယ်တွေလည်းအပါအဝင်ပဲ။ ဒါကလူတိုင်းလိုလိုသိပြီးသား။ မသိကြသေးတာက August မှာ ဂိမ်းဆော့လို့ရတယ်။ ဂိမ်းဆော့ဖို့အတွက် ပစ္စည်းလေးတွေထားပေးထားတယ်ဆိုတာပဲ။ ဂိမ်းတွေတော့ ထားပေးထားတယ်။ အဲ့ဒီထဲကမှ ကိုယ်ကြိုက်တာကို ယူဆော့။ ပိုက်ဆံလဲပေးစရာမလိုဘူး။ သူ့ဆိုင်မှာ အအေးလာသောက်၊ မုန့်စားရင်းနဲ့ကို ဆော့ချင်တဲ့သူဆော့ Free ပေးထားတယ်။ (ဆော့ပြီးရင်တော့ ပြန်ပေးခဲ့ဖို့ တော့ လိုတယ်ပေါ့)
ရယ်ရတယ်။ ဂိမ်းဆော့လို့ရတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တွေစသိခဲ့တုန်းက ဆော့တာက ဘာတဲ့။ မိုနိုပိုလီ ဆိုပဲ။ ငယ်ငယ်တုန်းကဆော့တဲ့အတိုင်းကိုထိုင်ဆော့ခဲ့ကြတယ်။ သုံး၊လေးနာရီလောက်လဲကြာသွားတယ်။ နည်းနည်းတော့အီသွားတယ်ပေါ့။ အခုတစ်ခါတော့အဲ့ဒါမဆော့တော့ဘူး။ ရွှေတူးတဲ့ဂိမ်းးဆိုလား၊ ရွှေရှာတဲ့ဂိမ်း ဆိုလား။ အဲ့ဒါက တစ်ဖွဲ့မှာ (၆)ယောက်လား၊ (၈)ယောက်လားမသိဘူး အများဆုံးဆော့လို့ရတယ်။ ဆိုတော့ အုပ်စုတောင့်တယ်ဆိုရင် ဒါလေးဆော့ စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်။ ဆော့နည်းမသိရင်လည်း ဆိုင်ကအမတွေ၊ အကိုတွေကပြပေးတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လဲဆော့ပြတယ်။ ကိုယ်တွေတုန်းကလည်း ဘယ်ကဘယ်လို စရမှန်းမသိတာနဲ့ သူတို့ကိုပဲအကူညီတောင်းရတာပဲ။ နှစ်ပွဲ၊ သုံးပွဲလောက်ဆော့လိုက်ရင်တော့ ဆော့တတ်သွားပါတယ်။ နောက် ကိုယ်တွေဆို ထ တောင်မပြန်ချင် ဖြစ်သွားတယ်။
မိုးရွာလို့မိုးခိုရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီမှာပဲအေးဆေးလေးထိုင်ဆော့လို့ရတယ်။ ကိုယ်တွေဆိုလဲသွားဆော့တယ်။ ပုံမှန် လည်ပတ်နေကျပုံစံတွေနဲ့ပဲဆိုရင် စိတ်ဖိစီးတာတွေ၊ အာရုံနောက်စရာတွေကရှိစမြဲပဲလေနော်။ ဒါလေးတွေဆော့ပြီး အဲ့ဒါတွေကနေ ခဏတာလောက်လွတ်သွားသလို ဖြစ်သွားတော့ စိတ်လည်းလန်းသွားတယ်ပေါ့။ ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆော့တာဆိုတော့ပိုပျော်ဖို့ကောင်း တယ်။ စဉ်းစားရတယ်၊ တွေးရတယ်။ ဆိုတော့ အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါလေးတွေဆော့ပါလို့။
ဂိမ်းချည်းပဲလည်းပြောနေလို့ကမဖြစ်သေး။ အစားအသောက်ကလည်းပြောရအုံးမယ်မဟုတ်လား ?
August မှာ နာမည်ကြီးတာက Milk Tea ပေါ့။ Pearl Milk Tea, Grass Jelly Milk Tea အဲ့ဒါတွေကလည်း အက်မင့်အကြိုက်တွေပဲ။ နောက် Lemon Passion QQ ဆိုတာလည်းမိုက်တယ်။ ချဉ်ချဉ်လေးပဲ။ နောက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သောက်တာ Lemon Strawberry Bobo ဆိုတာ သူကေတော့ အရမ်းမချိုပဲ ဆိမ့်ဆိမ့်လေး။ ဒါလေးလည်းမိုက်တယ်။ ဒီကအအေးတွေက June လဆန်းလောက်ကစပြီး ဈေးနည်းနည်းတက်မယ်လို့ဆိုင်မှာကပ်ထားတာတွေ့ခဲ့တယ်။ ဘယ်လောက်တက်မှာလည်းဆိုတော့ (၂၀၀)၊ (၂၅၀)လောက်ပဲတက်မှာပါတဲ့။ သူတို့ပစ္စည်းတွေကနိုင်ငံခြာားကနေတိုက်ရိုက်လာတာဆိုတော့ အဲ့ဒီမှာဈေးလေးနည်းနည်းတက်သွားလို့ပါတယ်။ အေးပေါ့ ဈေးတက်သွားတော့ ပထမ တစ်ခွက် (၁၅၀၀)ကနေ အခု (၁၇၅၀)လောက်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် မဆိုးပါဘူး။ ကိုယ်ကဒီဆိုင်ကိုကြိုက်လို့လားတော့မသိဘူး။ ဈေးတက်သွားလဲတန်နေတုန်းပါပဲ။ ဘာလို့ဆို အက်မင်တို့ဆိုဒီမှာ တစ်ခါထိုင်ရင် နှစ်နာရီ၊ သုံးနာရီလောက်က အေးဆေးထိုင်နေလို့ရတယ်။ အအေးတစ်ခွက်ထဲမှာပြီးထိုင်နေလဲဘာမှမပြောဘူး။ အဲ့ဒီတော့ကြိုက်တယ်လေ :P သူ့ဆီကအအေးတွေကို ကြိုက်တာလဲပါပါတယ် :D
နောက် Chicken Fillet Rice ဆိုတာ One Portion တစ်ယောက်စာပုံစံလေးနဲ့။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဗိုက်ဆာတယ်ဆိုတော့ ဒါလေးစားလိုက်တယ်။ မဆိုးပါဘူး။ တစ်နေရာထဲမှာတင် ဒါလေးပါရတယ်ဆိုတော့လဲ မိုက်တာပေါ့။ သူကတစ်ပွဲမှ (၂၅၀၀)ပဲရှိပါတယ်။ အရသာကတော့ချဉ်စပ်လေး။ ကြက်သားကိုချက်ထားတာက Thai Sauce အစပ်လေးနဲ့ မိုက်တယ်။ အကယ်၍အဲ့ဒီရောက်လို့ ဂိမ်းဆော့ရင်းဗိုက်ဆာတယ်ဆို ဒါလေးစားကြည့်လိုက်ဖို့ လက်တို့လိုက်ပါတယ်။
အခြား Snacks တွေကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ်တွေကဗိုက်လည်းသိပ်မဆာတော့ ဒါလေးတွေကိုပဲ အအေးလေးနဲ့သောက်လိုက် စားလိုက် ကစားလိုက်ပေါ့။ ဒီဆိုင်မှာကိုယ်အမြဲစားနေကျရှိတာက Hot Dot, French Fries, Chicken Pieces တွေပါပဲ။ ဒါကိုတော့ဒီမှာထိုင်တဲ့ဝိုင်းတိုင်းလိုလိုတော့ စားကြတာ သတိထားမိကြမှာပါ။ ဒါတွေကတော့ဈေးတက်တဲ့ထဲမပါဘူး။ ဆိုတော့ ဒါလည်းကောင်းတာပဲ။
By the Way, တစ်ခုလောက်သတိထားမိကြလားမသိဘူး။ ဒီမှာအအေးဝယ်ရင် အဲ့ဒီအအေးတစ်ခွက်စာ (၁၅၀၀)ဖြင့်(၁၅၀၀)ပေါ့။ အဲ့ဒါကို တစ်ရာတန်နဲ့ နှစ်ရာတန်ပေါင်းပြီး အအေးတစ်ခွက်တန်ဖိုးပြည့်အောင်ပေးနိုင် ရင် ခွက်သေးတစ်ခွက် Free ရတယ်။ ကိုယ်တော့ ရောက်တိုင်းတစ်ခါမှမပြည့်ပါဘူး။
ဒါမဲ့ကိုယ်ကြိုက်တာတစ်ခုက သူတို့ Loylty ကဒ်ပေးထားတယ်။ အဲ့ဒီမှာ တစ်ခွက်ဝယ်ရင်တစ်ကွက်ပေးတယ်။ (၁၀)ခွက်ပြည့်ရင် (၂၀၀၀)တန်အောက်အအေးတစ်ခွက်နဲ့ French Fries တစ်ပွဲလက်ဆောင်ရမှာ။ အက်မင်လဲအဲ့ဒါစုနေတယ်။ ပထမတစ်ကဒ်ရပြီးပြီ။ခု နောက်တစ်ကဒ်လဲ ဒါနဲ့ဆို ခြောက်ကွက်ရပြီ… ဘော်ဒါတွေလဲ အဲ့ဒီရောက်ရင် အဲ့ဒါလေးတွေစုထားကြနော်….
ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ ပိတ်ရက်လေးမှာအေးအေးဆေးဆေးလေး သူငယ်ချင်း၊ အပေါင်းသင်းတွေနဲ့ချိန်းပြီး စားကြ၊ သောက်ကြ ပြောကြဆိုကြရင် ဂိမ်းလေးတွေဆော့နိုင်ဖို့ နေရာကောင်းလေးတစ်ခုကိုလမ်းညွှန်ပေးလိုက် ပြီနော်….။ ပျော်လည်းပျော်ရတယ်။ ဗိုက်လည်းပြည့်ရတယ်။ စိတ်လည်း Relax ဖြစ်တော့ အက်မင်ကတော့ ဒီဆိုင်လေးကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါရစေ…
#MyLann #Online_Food_Guide #Food_Review_in_Yangon #Foodie_Myanmar #Food_Lover #Food_Crazy #Restaurant_in_Yangon
#August_Food_and_Drinks #August #Restaurant_in_Town